ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: လက်လှမ်းမှီသမျှ ကမ္ဘာ့ပြက္ခဒိန်တို့ကို စီစစ်ချက်
မြန်မာပြက္ခဒိန် တန်ခူးလဆန်း (၁)ရက်မှာ အိန္ဒိယပြက္ခဒိန်တို့က တပေါင်းလကွယ် တိထီ ၃၀လုံးပြည့်၍ တန်ခူးလဆန်း ၂ရက်မှာ အိန္ဒိယပြက္ခဒိန်တို့က တိထီ ၁-လုံး (တစ်ရက်)ကိုကျော်လွန်၍ လဆန်းတိထီ ၂-ရက်ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယပြက္ခဒိန်တို့ လဆန်း ၈-ရက်အထိ တူညီသွားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြက္ခဒိန်များကား သူရိယသိဒ္ဓန္တစသော တွက်ရိုးကျမ်းများကို မှီငြမ်း၍ အိန္ဒိယပြက္ခဒိန်များမှ ဆက်သက်လာပါသည်။ ဆင်းသက်လာကြသည် ဆိုသော်လည်း ပက္ခဒိန်ချင်း တတိုင်းတဖြတ်တည်း တပုံစံတည်းတော့ မကျပါ။
အထက်ပါနေ့စွဲဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတင်သွင်းသော စာမူကို အချောရေးသားပြီး ဆရာကြီး ဦးသန်းညွန့်၏ လက်ရေးမူဖြင့် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ . . .
မူရင်းလက်ခံ ဆရာကြီး ဦးသန်းညွန့် မန္တလေး ထံတွင်ရှိပါသည်။
Posted by aha at 11:04 PM
မြန်မာ့ရိုးရာ သံဒိဌ ပြက္ခဒိန် (၂၀၁၃)
သူရိယသိဒ္ဓါန္တ ဂြိုဟ်သွားပြက္ခဒိန် (၂၀၁၃)
၂၀၁၃ အတွက် နေ့စဉ်ဂြိုဟ်သွားပြက္ခဒိန်